Ijoon Marii Paartii Dimokraatawaa Oromoo (PDO) Maalfaa Ture? Kutaa 2ffaa Kichuu
HomeAfaan OromooRadioIjoon Marii Paartii Dimokraatawaa Oromoo (PDO) Maalfaa Ture? Kutaa 2ffaa
ODP-n(voaafaanoromoo)— jajjabinaa fi hanqina paartiicha mudatee irratti dubbachuun murtoo dabarsee marii xumuruu isaa Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan waajira koree giddu-galeessa ODP Raadiyoo Sagalee Amerikaaf ibsanii jiru.
Ijoon Marii Paartii Dimokraatawaa Oromoo (PDO) Maalfaa Ture?
WAASHINGITAN, DIISII — Koreen gidduu galeessa paartii Demokraatawaa Oromoo ykn ODP marii guyyoota lamaaf gaggeessaa ture kamiisa Onkolooleessa 17 bara 2019 xumuree jira.
Jajjabinaa fi hanqina paartiicha mudatee irratti dubbachuun murtoo dabarsee xumuruu isaa Obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan waajira koree giddu-galeessa ODP Raadiyoo Sagalee Amerikaaf ibsanii jiru.